Mbudzi 2017 - Network maRadio
musha / 2017 / Mbudzi
Mwedzi: November 2017
Inrico TM-7 / Einige Möglichkeiten yaive yakadaro alles möglich ist mit dem POC
Was kann ich alles machen mit dem Inrico TM-7? Hier einige Möglichkeiten aive akadaro alles moeglich ist. Aber es geht noch viel mehr. Na Zello.info
TM-7 yezvose zvido
Muvhidhiyo iri pazasi, ndinoratidza mashandisiro andinoita iyo Inrico TM-7 ne IRN, Zello, Echolink uye kunyangwe seredhiyo-scanner.
Ndinovimba unonakirwa nazvo. Ini ndinofunga iyi ndiyo yakanakisa IP Radio yandakambove nayo!
Kuburitsa uye kuisa Inrico TM-7 pane yako mota dashboard
Iyi vhidhiyo pazasi iri muchiGerman, chakagadzirwa na Zello Funk uye inoratidza kuburitswa kweiyo Inrico TM-7 uye kuti inokwana sei, zvakanaka, padhiza mota.
Uchishandisa Echolink neInrico TM-7
Echolink mashandiro anogona neiyo Inrico TM-7. Asi kudzamara vagadziri veEcholink vawedzera mukana wekupurinda bhatani rePRTT redhiyo kuti utore kiyi, iwe unofanirwa kubata iyo yekudhirowa kamwe chete kuti utange kutepfenyura, uye tora zvakare kuti umire. Kubva pakuona kwekushandisa, zvinoshanda zvakanaka. Isu hatisi kungoshandiswa nehunyanzvi. Zvisinei, isu tiri hams! Isu tinogara tichida kufungidzira!
Unogona kugara uchitumira e-mail kuna Echolink uye kumbira mashandiro akadaro!
Ongorora: Kuisa Echolink pane yako TM-7, uchafanirwa kuisa app inonzi "Set Orientation". Unofanirwa kuti iiswe ku "Reverse landscape". Iwe unonzwisisa nei! 🙂
Nakidzwa nevhidhiyo pazasi.
Ongororo Yakanaka pane Inrico TM-7 na KE8HAS
Heano wongororo yakanaka kwazvo pane iyo Inrico TM-7. Ndinovimba unonakidzwa ne Video.
Amateur Radio Nhema Chishanu
Nei usingafanire kuita amateur redhiyo ops kunakidzwa SUPER DISCOUNTS neChishanu Chishanu? Tarisa anotevera akasarudzika madhiri!
Inrico TM-7 - Yekutanga Mobile Network Radio
Iyo 3G / WiFi inokwanisa uye yakave yatove mutengesi wedu!
Shandisa kodhi yevavha CHISHANU uye tora 20% discount!Inowanikwa kubva network-radios.com
RFinder M1 - nekure kwazvo yepamusoro DMR Android Radio yakambovakwa. Kanganwa nezve programming Code plugs. Iine iyo RFinder M1 zvese zviri nyore senge poindi & tinya! Yakagadziriswa dhatabhesi yevanodzokorora vepasirese (analog & dijitari)
Get yenyu RFinder M1 ne Kutakurirwa mahara, uchishandisa kodhi BLACKFRIDAY
Inowanikwa kubva rfinder.shop - Iye wekuparadzira zviri pamutemo weRFinder.
Iyo inoshamisa 4G / WIFI Radio-Tone RT4 iri kupfuura zvinotarisirwa! Yakasimba kwazvo uye inoshamisa sarudzo yekuwana iyo IRN amateur network. Iyo odhiyo mhando inoshamisa uye iwe unogona kuwana kamwe dhisikaundi ye $ 20 uchishandisa kodhi RADIODISCOUNT
Inowanikwa kubva network-radios.com
Ungada here a 15W FM Stereo Nhepfenyuro Inofambisa? Sangana neTivdio nePLL neLCD.
Frequency ruzhinji: 87-108 MHz
Mutengo wenguva dzose: $249
Inowanikwa kubva MegaHertz.shop nokuti $199
Ongorora: Tarisa mutemo wemuno maererano nekushandiswa kweichi chinoendesa.
Kugadzira iyo Inrico TM-7 mabhatani
Muvhidhiyo iyi, Ini ndinoratidza maitiro ekuronga imwe neimwe yekiyi dze Inrico TM-7 mobile transceiver. Iwe unongoda kushandisa yakakosha app iyo ichaisa mepu makiyi nemabasa aunoda.
Muridzi wemba haatenderi kanyanga
Muridzi wemba haatenderi kanyanga. Saka ndakasiya rusaruro kumashure ndikatamira ku IRN. Uye ndinochida!
Dzidza zvakawanda nezve IRN yeham
Unoda rezinesi rakakodzera reHamradio kuti upfuure pane vapenyu vanodzokorora! Sei usingazviedze iwe pachako? Ndezvemahara. Unogona kutanga ne smartphone. Iko hakuna kudikanwa kwekutenga chero giya! Zvese zvaunoda ndeye smartphone.
Unogona kunyange kuhwina FREE network redhiyo ine yakadzamidzirwa UHF FM Transceiver. Dzidza kuti!
Unboxing iyo Inrico TM-7
Click pano kutarisa Video unboxing yeiyo Inrico TM-7
F22 Muzhizha & RT4 MuZima!
Kana iwe uine rezinesi rehamradio rinoshanda, unogona kuendesa pane vapenyu vanodzokorora kutenderera pasirese. Wakamirira chii? Ramba uchikurukura neyako ham nharaunda KWENYU kupi zvako pasi! Kusvika paunenge uine internet yekubatana, kungave neWiFi, 3G kana 4G, kushandisa network redhiyo zvaisambove nyore kuwana network yepasirese yeredhiyo yeamateur: Iyo IRN - International Radio Network iyo inosanganisa DMR, Echolink, AllStar uye analogue vanodzokorora vese pamwe chete. Iyi yepasi rese network iri kukura nekukasira kumhanya.
Iwe uchasangana neCrystal uye kurira kukuru, kutaridzika kunoshamisa, mabhatiri ayo anogara kwemazuva. Iwe unogona, semuenzaniso, kuyambuka-nyika ne, pasina kana kumboregedza siginari uye kunetseka kuti ndeipi inodzokorora mafrifti ekushandisa.
Mufananidzo pazasi: Radio-Tone RT4 pazuva rinonaya.